ဒီလို စုံတွဲ မျိုး သေတောင်မပြတ်ဘူး.. - Focus Myanmar
ဒီလို စုံတွဲ မျိုး သေတောင်မပြတ်ဘူး..
April 20, 2019 By Myanamr Plus in အနုပညာ Tags: ရည်းစား
ကျနော် ရည်းစား မရခင် အထိ တကယ်ကို ပိန်ပိန်သေးသေးလေးရယ်… G-fatt သွားတိုက်နေတဲ့ ပုံကမှ
ကိုယ့်ထက် တောင့်ဦးမယ် ကိတ်ဦးမယ်ဆို။ အဲ့ဒါ သူမနဲ့ မတွဲခင် အချိန်ထိပဲ ဆိုပါတော့…ချစ်သူသက်တမ်း 1 နှစ်လောက်နဲ့ J-fire ဘော်ဒီမျိူး ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရလာခဲ့တယ်လေ.. နည်းတဲ့ ကုသိုလ်ကံလားလို့။ အဓိကကတော့ သူမကြောင့်ပေါ့ဗျာ.. Body Weight မတက်ပဲ နေပါ့မလား.. ဘယ့်နှယ့်ဗျာ အားနေ စားမယ် ဆိုတာချည်း…
ရန်ကုန်မြို့ မှာ သူမ မစားဖူးတဲ့ဆိုင် အစားအစာ မရှိသလောက်ပဲလေ… သူမက အစားချည်း တစ်လိုင်းပဲကိုး .. ဘာဘီရုပ်လေးလိုလို အမွှေစိန် ရုပ်လေးလိုလို ချစ်စရာ ကောင်းနေတာတော့ ငြင်းမရပါဘူး..
အလွန်ဆုံးရှိလှ ပေါင်က 100. ပေါ့.. ကိတ်တဲ့နေရာဆိုလို့ လိုက်ရှာကြည့်တယ်.. ခြေသလုံး နှစ်ဖက်ပဲ တွေ့ရတယ်.. ပြောရရင် ခင်ဝင့်ဝါ မျက်နှာနဲ့ ပွင့် ခြေသလုံးမျိူး။ သူမမှာ ထူးခြားချက်တွေ အတော်တော့ များတယ်
ဘယ်လောက်စားစား ခွေးပစ်တဲ့တုတ်ပဲ Gym ပင်ပင်ပန်းပန်း ဆော့စရာ မလိုဘူး.. လက်မောင်းလေး တွေဆို သွယ်သွယ် လျလျလေး ( ခြေသလုံးကတော့ ခြွင်းချက်ပေါ့နော် )
လည်တံလေးတွေများ စင်းနေတာပဲရယ်.. လက်ချောင်း ခြေချောင်းလေးတွေက ကော့ပျံပြီး ရှည်ရှည်လေးနဲ့သွယ်သွယ်လေး.. သွားတက်လေးနဲ့ ရယ်လိုက်ရင် အသဲယားစရာ ( နောက်မှသိတယ် ဘီလူးလိုစားတာကိုး )
တစ်ခုပဲ အပြစ်ပြောစရာ ရှိတယ် “ဗိုက်” ပဲ.. ဟုတ်တယ် လူကသာ မကိတ်တယ် ဗိုက်ကကျ အရစ်အရစ်လေးနဲ့ အဆီလေး ထပ်လို့.. ဒါကလည်း သိပ်မသိသာပါဘူး.. သူမက လည်တယ် ပန်ကာမလေ
ဗိုက်ကလေး ချပ်နေအောင် ရှုံ့ပြီး နေရတာနဲ့.. Online က မှာထားတဲ့ ဗိုက်ချပ်င်္အကျီ ဝယ်ဝတ်ထားရတာနဲ့။
ချစ်သူစဖြစ်တဲ့ ပထမဆုံးနေ့။ မနက် 9:00 တိတိ Lotteria ဆိုင်မှာ ချိန်းတယ်.. မှာချက်ကြီးက ကျွတ်ဆင်နော်.. ကြက်စပ် 4.တုံး အာလူးချောင်းကြော် 2.ပွဲ ရေခဲမုန့်က 2.ခွက် တဲ့။
အေး အဲ့ဒါ ကိုယ့်အတွက် မပါဘူး.. သူမတစ်ယောက်တည်းစာ မှာတာ.. ကိုယ့်မှာ ကြက်ကြော်လေး 1.တုံးတောင် မနည်း ကျားကန်စားရတယ်.. သူမကြည့်တော့ သာသာယာယာပဲ..
Selfie လေးဆွဲလိုက် ဖုန်းလေးပွတ်လိုက်.. အပြုံးမပျက်ဘူး ဆွဲတာဆွဲတာ ဆိုတာလေ… ကိုယ့်မှာ Surprise ဖြစ်လား မဖြစ်လား.. ပါးစပ်လေးဟလို့ ယင်ကောင် ဝင်ဥတာတောင် မသိတော့တဲ့ အထိ။
12:30 ရုပ်ရှင် ကြည့်မယ်တဲ့… နေကြာစေ့အထုပ်ကြီး 2.ထုပ် ငုံးဥပြုတ်က 4.ထုပ် ပေါက်ပေါက်ဆုပ်က 2.ဘူး ဆတ်သားခြောက်က 3.ထုပ် အချဉ်ပေါင်းက 2.ထုပ် ချိစ်ပေါင်မုန့်က3ခု Ice coffee က သိပ်မကြိုက်လို့ 2.ခွက် ရေသန့်ဘူးကြီးက 2.ဘူး Tissue က3ထုပ် လိုရမယ်ရ Shark2ဘူးပါ ပါသေး။
ကိုယ့်မှာ ရထားဘူတာရုံ အောက်မှာ လိုက်ရောင်းနေတဲ့ ဈေးသည် ကျနေတာပဲ.. လက်ထဲ တိုးလို့တွဲလောင်း မနိုင်မနင်းနဲ့ စားစရာတွေ သယ်ထားရတာလေ။ သူမက ရှေ့က ကော့ပက်ကော့ပက်နဲ့ ဝင်သွားလေရဲ့…
Toilet နားရောက်တော့ ခဏတဲ့.. ကိုယ့်မှာ မုန့်ထုပ်ပိုက်ရင်း အပြင်မှာ စောင့်နေတုန်း ဖတ်ဆို ကိုယ့်လက်ထဲက နေကြာစေ့ထုပ် လာဖြုတ်သွားတယ် အဒေါ်ကြီးတစ်ယောက်။ ဘာမပြော ညာမပြောနဲ့ 500 တန်တစ်ရွက် လက်ထဲ ထိုးထည့်ပေးသွားလေရဲ့… ကိုယ့်မှာ ငြင်းချိန်တောင် မရလိုက်ဘူးရယ်။
ရုံထဲရောက်တော့ ကိစ္စက မပြီးသေးဘူး.. နေကြာစိ အခွံခွာ ခွံ့ကျွေးရတာနဲ့ ဆတ်သားခြောက် အနှီးထိုင် နွှာနေရတာနဲ့ ရေသန့်ဘူး ဖွင့်တိုက်ရတာနဲ့ ဇာက်ကြော ဆွဲပေးရတာက ရှိသေး.. ကမ မဆံ့မပြဲ စားတာကိုး.. တက်ပြီပေါ့ အကြောက…
ကိုယ်လည်း နှမြောတတ်တာနဲ့ ကျန်တဲ့မုန့် အကုန် ရှင်းရတော့တာပေါ့.. အဲ့သလိုကစ Weight တက်ဖို့ အကြောင်းဖန် လာခဲ့တာ။ အပြန် ဝက်သားတုတ်ထိုး ဝင်ဆွဲတယ်.. ပြောရင် ယုံမယ် မထင်ဘူး.. ဗန်းပါပျောက်တယ်.. ဝက်သားသည်ဆို လက်ပါ အကြောကပ်ရော..
လှီးရလွန်းလို့ ထိုးစရာတုတ် မရှိတော့လို့ သွားကြားထိုးတံနဲ့ပါ ထိုးနေရပြီလေ.. ကိုယ်လည်း အစပိုင်းက ရှိန်နေသေးတယ်.. ဟုတ်တယ်လေ ခုမှ ချစ်သူဖြစ်ကာစ ဆိုတော့ ရှိုးတိုးရှန့်တန့် လုပ်ပြ နေပြရသေးတာကိုး..
နောက်ပိုင်းကျ မရတော့ဘူး.. သူမဆွဲချက် လန်ထွက်လာတာ.. ကြာရင် ကိုယ့်အတွက် ဝက်သွေးပါ ကျန်မှာမဟုတ်တော့ဘူး အဲ့တော့ လုလုပြီးတော့ကို ဆွဲတာ သူမနဲ့ လုကတာ ပျော်သလိုတောင် ဖြစ်သေး.. Bills ရှင်းမှသာ မျက်ဖြူ ကိုဆိုက်ရော
စုစုပေါင်း2သောင်း ခွဲကျော် ကျတာလေ။ နှစ်ယောက်သား ဗိုက်တွေတင်း လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့လို့ တစ်ယောက်ပုခုံး တစ်ယောက်ဖက်ရင်း ကားဂိတ်က ထိုင်ခုံလေးမှာ ထိုင်နေရတဲ့အထိ Skills ကြမ်းခဲ့တာ။
လွမ်းလို့ တွေ့ချင်တယ် တစ်ခါမှ မရှိဘူးရယ်.. တစ်ခုခုစားဖို့ တွေ့ချင်တယ် ဆိုတာချည်း။ ချစ်သူဖြစ်တာ 1.လပြည့် အထိမ်းအမှတ် ရွှေကောင်းဟော့ပေါ့မှာ Date ကြတယ်… အဖွားဆုံးတာ ဝမ်းနည်းလို့ 19.လမ်းမှာ တစ်ဖြဲနှစ်ဖြဲ သွားစားတယ်…
လစာထုတ်ရက် ကမ်းနားညဈေးမှာ ဂဏာန်းမဆလာ စားတယ်… သူမမွေးနေ့တဲ့ ရွှေတောင်တန်းက Oishi ဆူရှီဆိုင် ဒိုးတယ်… ထီ 5.သောင်းဆု ပေါက်လို့ မိုးကောင်းမှာ ငါးကင် သွားဝိုက်တယ်… အိမ်ကကြောင်မလေး သားပေါက်တယ် BBQ မှာ အကင်သွားစားကြပြန်ရော…
စိတ်ကောက်လို့ ပြန်ချော့ရမယ် တဲ့.. မင်းလမ်းက ရခိုင်မုန့်တီ နဲ့ ပင်လယ်စာဆိုင်မှာ… Holiday ရောက်တိုင်း တရုတ်တန်းမှာ တဝဲလည်လည်… စိတ်ညစ်တာလည်း မရဘူး.. အနိမ့်ဆုံး Ykko ကြေးအိုးဆိုင်ပဲ…
အလကားနေ ပွဲရှာနေတော့တာ စားဖို့သောက်ဖို့ အတွက် အကွက် ရှာနေတော့တာ တွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ လစ်ပြီပဲ ရန်ဖြစ်ဖို့ အချိန်မရဘူး.. ဘယ်ဆိုင် အသစ်ဖွင့်လည်း ရှာနေရလို့။
Valentine’s day လား? လုပ်မနေနဲ့ ရွှေလာမှာ လာဖမ်း ကျိန်းသေ မိလိမ့်မယ် ဘယ်မှ မပြေးဘူးရယ်။ စိတ်ချ ဒီလိုအတွဲမျိူး သေတောင် မပြတ်ဘူး..ကုပ်နဲ့ကော်ထုတ်တောင် ထွက်မသွားဘူး.. Anni တွေအထပ်ထပ် စားဖော်သောက်ဖက် အဖြစ် ရှိနေပေးရဦးမှာကိုး။
Credit : .loveshortnotes
ကနြျော ရညျးစားမရခငျ အထိ တကယျကို ပိနျပိနျသေးသေးလေးရယျ… G-fatt သှားတိုကျနတေဲ့ ပုံကမှ
ကိုယျ့ထကျ တောငျ့ဦးမယျ ကိတျဦးမယျဆို။ အဲ့ဒါ သူမနဲ့ မတှဲခငျ အခြိနျထိပဲ ဆိုပါတော့…
ခဈြသူသကျတမျး 1 နှဈလောကျနဲ့ J-fire ဘျောဒီမြိူး ပိုငျဆိုငျခှငျ့ ရလာခဲ့တယျလေ.. နညျးတဲ့ ကုသိုလျကံလားလို့။ အဓိကကတော့ သူမကွောငျ့ပေါ့ဗြာ.. Body Weight မတကျပဲ နပေါ့မလား.. ဘယျ့နှယျ့ဗြာ အားနေ စားမယျ ဆိုတာခညျြး…
ရနျကုနျမွို့မှာ သူမ မစားဖူးတဲ့ဆိုငျ အစားအစာ မရှိသလောကျပဲလေ… သူမက အစားခညျြး တဈလိုငျးပဲကိုး .. ဘာဘီရုပျလေးလိုလို အမှစေိနျ ရုပျလေးလိုလို ခဈြစရာ ကောငျးနတောတော့ ငွငျးမရပါဘူး..
အလှနျဆုံးရှိလှ ပေါငျက 100. ပေါ့.. ကိတျတဲ့နရောဆိုလို့ လိုကျရှာကွညျ့တယျ.. ခွသေလုံး နှဈဖကျပဲ တှရေ့တယျ.. ပွောရရငျ ခငျဝငျ့ဝါ မကျြနှာနဲ့ ပှငျ့ ခွသေလုံးမြိူး။ သူမမှာ ထူးခွားခကျြတှေ အတျောတော့ မြားတယျ
ဘယျလောကျစားစား ခှေးပဈတဲ့တုတျပဲ Gym ပငျပငျပနျးပနျး ဆော့စရာ မလိုဘူး.. လကျမောငျးလေး တှဆေို သှယျသှယျ လလြလြေး ( ခွသေလုံးကတော့ ခွှငျးခကျြပေါ့နျော )
လညျတံလေးတှမြေား စငျးနတောပဲရယျ.. လကျခြောငျး ခွခြေောငျးလေးတှကေ ကော့ပြံပွီး ရှညျရှညျလေးနဲ့သှယျသှယျလေး.. သှားတကျလေးနဲ့ ရယျလိုကျရငျ အသဲယားစရာ ( နောကျမှသိတယျ ဘီလူးလိုစားတာကိုး )
တဈခုပဲ အပွဈပွောစရာ ရှိတယျ “ဗိုကျ” ပဲ.. ဟုတျတယျ လူကသာ မကိတျတယျ ဗိုကျကကြ အရဈအရဈလေးနဲ့ အဆီလေး ထပျလို့.. ဒါကလညျး သိပျမသိသာပါဘူး.. သူမက လညျတယျ ပနျကာမလေ
ဗိုကျကလေး ခပျြနအေောငျ ရှုံ့ပွီး နရေတာနဲ့.. Online က မှာထားတဲ့ ဗိုကျခပျြင်ျအကြီ ဝယျဝတျထားရတာနဲ့။
ခဈြသူစဖွဈတဲ့ ပထမဆုံးနေ့။ မနကျ 9:00 တိတိ Lotteria ဆိုငျမှာ ခြိနျးတယျ.. မှာခကျြကွီးက ကြှတျဆငျနျော.. ကွကျစပျ 4.တုံး အာလူးခြောငျးကွျော 2.ပှဲ ရခေဲမုနျ့က 2.ခှကျ တဲ့။
အေး အဲ့ဒါ ကိုယျ့အတှကျ မပါဘူး.. သူမတဈယောကျတညျးစာ မှာတာ.. ကိုယျ့မှာ ကွကျကွျောလေး 1.တုံးတောငျ မနညျး ကြားကနျစားရတယျ.. သူမကွညျ့တော့ သာသာယာယာပဲ..
Selfie လေးဆှဲလိုကျ ဖုနျးလေးပှတျလိုကျ.. အပွုံးမပကျြဘူး ဆှဲတာဆှဲတာ ဆိုတာလေ… ကိုယျ့မှာ Surprise ဖွဈလား မဖွဈလား.. ပါးစပျလေးဟလို့ ယငျကောငျ ဝငျဥတာတောငျ မသိတော့တဲ့ အထိ။
12:30 ရုပျရှငျ ကွညျ့မယျတဲ့… နကွောစအေ့ထုပျကွီး 2.ထုပျ ငုံးဥပွုတျက 4.ထုပျ ပေါကျပေါကျဆုပျက 2.ဘူး ဆတျသားခွောကျက 3.ထုပျ အခဉျြပေါငျးက 2.ထုပျ ခြိဈပေါငျမုနျ့က3ခု Ice coffee က သိပျမကွိုကျလို့ 2.ခှကျ ရသေနျ့ဘူးကွီးက 2.ဘူး Tissue က3ထုပျ လိုရမယျရ Shark2ဘူးပါ ပါသေး။
ကိုယျ့မှာ ရထားဘူတာရုံ အောကျမှာ လိုကျရောငျးနတေဲ့ ဈေးသညျ ကနြတောပဲ.. လကျထဲ တိုးလို့တှဲလောငျး မနိုငျမနငျးနဲ့ စားစရာတှေ သယျထားရတာလေ။ သူမက ရှကေ့ ကော့ပကျကော့ပကျနဲ့ ဝငျသှားလရေဲ့…
Toilet နားရောကျတော့ ခဏတဲ့.. ကိုယျ့မှာ မုနျ့ထုပျပိုကျရငျး အပွငျမှာ စောငျ့နတေုနျး ဖတျဆို ကိုယျ့လကျထဲက နကွောစထေု့ပျ လာဖွုတျသှားတယျ အဒျေါကွီးတဈယောကျ။ ဘာမပွော ညာမပွောနဲ့ 500 တနျတဈရှကျ လကျထဲ ထိုးထညျ့ပေးသှားလရေဲ့… ကိုယျ့မှာ ငွငျးခြိနျတောငျ မရလိုကျဘူးရယျ။
ရုံထဲရောကျတော့ ကိစ်စက မပွီးသေးဘူး.. နကွောစိ အခှံခှာ ခှံ့ကြှေးရတာနဲ့ ဆတျသားခွောကျ အနှီးထိုငျ နှာနရေတာနဲ့ ရသေနျ့ဘူး ဖှငျ့တိုကျရတာနဲ့ ဇာကျကွော ဆှဲပေးရတာက ရှိသေး.. ကမ မဆံ့မပွဲ စားတာကိုး.. တကျပွီပေါ့ အကွောက…
ကိုယျလညျး နှမွောတတျတာနဲ့ ကနျြတဲ့မုနျ့ အကုနျ ရှငျးရတော့တာပေါ့.. အဲ့သလိုကစ Weight တကျဖို့ အကွောငျးဖနျ လာခဲ့တာ။ အပွနျ ဝကျသားတုတျထိုး ဝငျဆှဲတယျ.. ပွောရငျ ယုံမယျ မထငျဘူး.. ဗနျးပါပြောကျတယျ.. ဝကျသားသညျဆို လကျပါ အကွောကပျရော..
လှီးရလှနျးလို့ ထိုးစရာတုတျ မရှိတော့လို့ သှားကွားထိုးတံနဲ့ပါ ထိုးနရေပွီလေ.. ကိုယျလညျး အစပိုငျးက ရှိနျနသေေးတယျ.. ဟုတျတယျလေ ခုမှ ခဈြသူဖွဈကာစ ဆိုတော့ ရှိုးတိုးရှနျ့တနျ့ လုပျပွ နပွေရသေးတာကိုး..
နောကျပိုငျးကြ မရတော့ဘူး.. သူမဆှဲခကျြ လနျထှကျလာတာ.. ကွာရငျ ကိုယျ့အတှကျ ဝကျသှေးပါ ကနျြမှာမဟုတျတော့ဘူး အဲ့တော့ လုလုပွီးတော့ကို ဆှဲတာ သူမနဲ့ လုကတာ ပြျောသလိုတောငျ ဖွဈသေး.. Bills ရှငျးမှသာ မကျြဖွူ ကိုဆိုကျရော
စုစုပေါငျး2သောငျး ခှဲကြျော ကတြာလေ။ နှဈယောကျသား ဗိုကျတှတေငျး လမျးမလြှောကျနိုငျတော့လို့ တဈယောကျပုခုံး တဈယောကျဖကျရငျး ကားဂိတျက ထိုငျခုံလေးမှာ ထိုငျနရေတဲ့အထိ Skills ကွမျးခဲ့တာ။
လှမျးလို့ တှခေ့ငျြတယျ တဈခါမှ မရှိဘူးရယျ.. တဈခုခုစားဖို့ တှခေ့ငျြတယျ ဆိုတာခညျြး။ ခဈြသူဖွဈတာ 1.လပွညျ့ အထိမျးအမှတျ ရှကေောငျးဟော့ပေါ့မှာ Date ကွတယျ… အဖှားဆုံးတာ ဝမျးနညျးလို့ 19.လမျးမှာ တဈဖွဲနှဈဖွဲ သှားစားတယျ…
လစာထုတျရကျ ကမျးနားညဈေးမှာ ဂဏာနျးမဆလာ စားတယျ… သူမမှေးနတေဲ့ ရှတေောငျတနျးက Oishi ဆူရှီဆိုငျ ဒိုးတယျ… ထီ 5.သောငျးဆု ပေါကျလို့ မိုးကောငျးမှာ ငါးကငျ သှားဝိုကျတယျ… အိမျကကွောငျမလေး သားပေါကျတယျ BBQ မှာ အကငျသှားစားကွပွနျရော…
စိတျကောကျလို့ ပွနျခြော့ရမယျ တဲ့.. မငျးလမျးက ရခိုငျမုနျ့တီ နဲ့ ပငျလယျစာဆိုငျမှာ… Holiday ရောကျတိုငျး တရုတျတနျးမှာ တဝဲလညျလညျ… စိတျညဈတာလညျး မရဘူး.. အနိမျ့ဆုံး Ykko ကွေးအိုးဆိုငျပဲ…
အလကားနေ ပှဲရှာနတေော့တာ စားဖို့သောကျဖို့ အတှကျ အကှကျ ရှာနတေော့တာ တှပွေီ့ဆိုတာနဲ့ လဈပွီပဲ ရနျဖွဈဖို့ အခြိနျမရဘူး.. ဘယျဆိုငျ အသဈဖှငျ့လညျး ရှာနရေလို့။
Valentine’s day လား? လုပျမနနေဲ့ ရှလောမှာ လာဖမျး ကြိနျးသေ မိလိမျ့မယျ ဘယျမှ မပွေးဘူးရယျ။ စိတျခြ ဒီလိုအတှဲမြိူး သတေောငျ မပွတျဘူး..ကုပျနဲ့ကျောထုတျတောငျ ထှကျမသှားဘူး.. Anni တှအေထပျထပျ စားဖျောသောကျဖကျ အဖွဈ ရှိနပေေးရဦးမှာကိုး။